Mu’tamarkii 8-aad ee Ahlunna waljamaaca ee qaarada yurub oo ka furmay Stockholm Sweden. - Xusuus
Saturday, 23 June, 2012 I Latest Update 11:54 pm Home
Mu’tamarkii 8-aad ee Ahlunna waljamaaca ee qaarada yurub oo ka furmay Stockholm Sweden.
By: xusuus, Post on:23 June, 2012, Share this story
Mu’tamarkii sideedaaad ee culumaa’udiinka ahlusunna waljamaaca ee qaarada yurub ayaa sanadkan si rasmi ah uga furmay magaalada Stoclholm ee Xarunta dalka Sweden, iyada oo culumaa’udiin magac iyo maamuus ku leh bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ay soo xaadireen.
Furitaanka Mu’tamarkan ayaa waxaa ka hadlay Macalin Saciid Xasan oo sanadkan isaga iyo jameecadiisa ay marti galiyeen Mu’tamarka waxa uuna ku soo dhaweeyey culumaa’udiinka iyo dhamaan jameecooyinka kala duwan ee ka soo qeybgalay mu’tamarka sida qiimaha badan leh oo ay u soo xaadideen.
Mu’tamarkan ayaa waxaa muxaadarooyin qiimo badan xambaarsanaa ka soo jeediyey Culimaa’udiinka kala ah .
Sh. Muuse Cadde oo ka yimid Holand,
Sh. Axmed C/kariin oo ka yimid Norway,
Shiikh fanax oo ka yimid Uk
Sh. C/raxmaan Sh. Muxudiin Celi oo ka yimid Gothenburg Sweden, iyo
Sh. Daahi Xaaji Xasan.
ka hor furitaanka Mu’tamarka ayaa waxaa jameecooyinka kala duwan ee isaga kala yimid sweden iyo wadamada ku xeeran ay soo bandhigeen xalqooyin digri salaam ah, iyo nabi amaan, waxaana digri salaamkan iyo subac quraanka kariimka ah uu illaa iyo xalay ka socday Xaafada tenesta ee isla magaalada Stockholm.
Mutamarka sanadkan ayaa waxaa ka soo qeybgalay boqolaal isugu jiray culumaa’udiin, dadweyne aad u fara badnaa kuwaas oo qalbi qushuuc ku dheehan yahay ku dhageysanayey muxaadarooyinka qiimaha leh oo ay culimadu soo bandhigayeen.
Abaabulka iyo qaban qaabada mu’tamarkan ayaa waxa ay aheyd mid aad u sareysay marka laga eego gudiyada loo xilsaaray deegaanka, raashinka iyo nidaamka kuwaas oo si qurux badan iskula shaqeynayey, taasina waxa ay aheyd mid soo jiidatay ka qeybgalayaasha mutamarkan.
Caawa ayaa la filayaa in la soo gunaanado mutamarkan, waxaana muxaadarooyinka maanta ku qoran culumaa’udiin uu ka mid yahay shiikh Muxudiin Xasan Ayaanle , Sh, cali Loobage iyo culumaad’udiin kale .
BOOK REVIEW/FALLANQAYN BUUG! Buug Dhugasho iyo Dhuuxid mudan!! (When Donkeys Give Birth to Calves) Murasha Xasan Sheekh iyo Xisbigiisa oo deeq gaarsiiyey agoon caruur iyo darbi jiif ah Categories
xusuus Add a Comment on "Mu’tamarkii 8-aad ee Ahlunna waljamaaca ee qaarada yurub oo ka furmay Stockholm Sweden."